Alexis Sanchez Oo U Muuqda Mid Helay Wadadii Uu Kaga Baxsan Lahaa Dhibaatada Ku Haysata Manchester United & Koox Weyn Oo Ree Yurub Ah Oo January La Saxeexan Karta - GOOL24.NET
Alexis Sanchez Oo U Muuqda Mid Helay Wadadii Uu Kaga Baxsan Lahaa Dhibaatada Ku Haysata Manchester United & Koox Weyn Oo Ree Yurub Ah Oo January La Saxeexan Karta
Garabka kooxda Manchester United ee Alexis Sanchez ayaa u muuqda mid ugu dambayn helaya wadadii uu kaga baxsan lahaa dhibaatooyinka uu ku mudanayo kooxdiisa xilli saxeexiisa lala xidhiidhinayo koox weyn oo qaarada Yurub ah.
Kooxda ree France ee Paris Saint-Germain ayaa lagu sheegay mida ugu cad cad ee xiddigan ree Chile ka samato bixin karta xaalada cakiran ee uu Old Trafford ku marayo sagaalkii bilood ee ugu dambeeyay.
Wakiilada Sanchez ayaa ah kuwo mudooyinkii ugu dambeeyay ku hawlan sidii ay koox ku haboon xiddigan ugu heli lahaayeen balse mushahaarkiisa toddobaadlaha ah ee £500,000 ah ayaa ah mid caqabad noqon kara.
Paris Saint-Germain ayaa la filayaa inay jeclaan lahayd sidii ay xiddig kale oo weerarka ku wanaagsan u keeni lahayd kooxdeeda walow ay xilli horeba qani ka yihiin booskaas isla markaana ku haystaan saddexleyda Cavani, Neymar iyo Mbappe.
Sanchez ayaa hore iskaga diiday ku biirista Paris horaantii sanadkan isaga oo doortay Man United balse kooxda difaacanaysa horyaalka Ligue 1 waxa ay markale kusoo laaban kartaa baadigoobkiisa.
29 jirkan ayaan haatan kalsooni buuxda ka haysan tababare Jose Mourinho isaga oo kulamadii ugu dambeeyay keydka u galay xiddigaha da’da yar ee Marcus Rashford iyo Anthony Martial.
Si kastaba ha ahaatee, PSG ayaa kamid ah kooxaha ugu macquulsan ee uu xiddigani ku biiri karo maadaama oo ay kamid yihiin kooxaha dhifta ah ee mushaharkiisa bixin kara.